Sheffield Maxay ugu Dagaalamaysaa Aqoonsiga Somaliland: the Star - #1Araweelo News Network https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
Sheffield Maxay ugu Dagaalamaysaa Aqoonsiga Somaliland: the Star
“Sheffield Maxay ugu Dagaalamaysaa Aqoonsiga Somaliland Warbixin Lagu Daabacay Wargeyska the Astar Ee Kasoo Baxa London”Warbixin Lagu Daabacay Wargeyska the Astar Ee Kasoo Baxa London
“Dadka reer Somaliland waxa ay xaq u leeyihiin in ay helaan Aqoonsi”
London(ANN)-Warbixin lagu daabacay Wargeyska The Star oo kasoo baxa dalka Britain, ayaa daabacay warbixin uu si weyn ugu qaadaa dhigay qadiyadda aqoonsi raadinta jamhuuriyadda Somaliland.
Warbixintaa oo uu qoray Weriye ka tirsan The Star oo magaciisu yahay Alex Wilkinson, wuxuu kaga hadlay doorka Jaaliyadda Somaliland ee Dalka Britain, gaar ahaan Ururka Israac ee Bulshada Somaliland ee Sheffield
Xarunta Ururka Israac Sheffield, ayaa u adeegta aqoonisga Somaliland iyo ilaalinta danaha Bulshada asal ahaan kasoo jeeda Somaliland ee Sheffield, balse inta badan ku salaysan dhaqanka Soomaalida iyo Somaliland.
Warbixinta ayuu ku sheegay in Dad badan oo reer Somaliland ah Sheffeild ka dhigteen Hoygooda tan iyo sagaashamaadkii, kuwaas oo si weyn ugu ololeeya iyaga oo ay weheliyaan dadka reer Somaliland ee ku kala nool daafaha caalamka sidii ay Somaliland dunida uga heli lahayd aqoonsi ee ay u noqon laahyd dal dal madax-bannaan.
Doodii baarlamaanka ee toddobaadkii hore, ayaa waxa lagu heshiiyey in xisbiyo ka tirsan baarlamaanka UK ay ku taageereen in UK ay aqoonsato Somaliland, kaddib markii ay fadhiga soo dhigeen mooshin lagaga hadlayo aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland, waxayna arrintaasi si weyn uga turjumaysaa aragtida dhabta ah ee bulshada Somaliland iyo rabitaanka aqoonsiga ay raadinayaan.
Doodda ayaa sidoo kale noqotay mid ay shacabka reer Somaliland toddobaadkii hore si farxad leh ugu ciiddeen dariiqyada, taas oo ay xataa ciidamada boolisku ka qayb qaateen.
Dawladda UK ayaa maalgashi ku samaysa Somaliland, iyadoo qayb ka ah maalgelinta DP. World ee Dekedda Berbera iyo madaarka dib u cusuboonaysiin uu Imaaraadku ku sameeyay, wallow sida lagu sheegay warbixinta aannay UK wali u aqoonsan Somaliland inay tahay qaran madax-banaan.
“Durba waxa dalka Britain ka socda codsi ku saabsan in Somaliland si rasmi ah loo aqoonsado, waxayna bulshadu jeclaysanaysaa in dadka lagu wacyigaliyo aqoonsiga Somaliland, cid kastana lagu dhiirigeliyo in uu taariikhda Somaliland wax ka barto, isla markaana uu ka qayb qaato codsigaas.”
Gollaha deegaanka ee Sheffield ayaa noqday maamulkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u aqoonsada Somaliland, tallaabadaas oo ay si weyn u soo dhaweeyeen bulshada Somaliland, waxaanay keentay in gollayaasha deegaanka ee UK oo dhan ay ku daydaan gollayaasha deegaanka ee Cardiff iyo Birmingham.
Haweenayda Diana oo saaxiib la ah jaaliyadda Israac ayaa u sheegtay The Star in howlo badan oo ay qabteen jaaliyadu ay tahay sidii loo gaadhi lahaa horumarka ay ilaa hadda gaadheen.
“Gollaha deegaanka Sheffeild waxa uu ahaa gollihii ugu horeeyey ee si rasmi ah u aqoonsada in Somaliland ay noqoto qaran madax-banaan, halkan Sheffield hawlo badan ayaa laga qabtay, taasna shacabka ayaa ka masuula,” ayay tidhi.
“Shaqadaas adag ayay galiyeen, macno badana way u leedahay, waxaana hadda jira magaalooyin kale Birmingham, Cardiff oo iyaguna taas sameeyay, sidaa waxa u sheegtay The Star, Diana oo saaxiib la ah Israac, isla markaana taageero badan siisa qadiyadda bulshada Somaliland.
“Taariikh aad u tiro badan baa jirta, dad badan oo reer Somaliland ah ayaa halkan yimi horraantii sagaashamaadkii, sababtoo ah waxa ay xasuuq kala kulmeen dawladdii Soomaalida ee Taliskii Maxamed Siyaad Barre ayay ku sheegtay warbixinta.
Dhinaca akle, warbixinta ayaa lagu sheegay in Reer Somaliland hadda go’aan ku gaadheen inay joojiyaan wada-hadalladii ay la lahaayeen Soomaaliya, maadaama aannay Soomaaliya ka jirin dowlad.
“Taariikhdu aad ayay u qabowday dad badan oo reer Somaliland ah oo ku nool dalka Ingiriiska maanta waxa ay arkeen oo ay soo mareen waxyaabo aad u xun, iyadoo Qaramada Midoobay ay si rasmi ah u aqoonsatay xasuuq ka dhan ah Somaliland intii lagu jiray ‘xasuuqii la illoobay’ ee dagaalladii sokeeye ee Soomaaliya, ayaa lagu yidhi, warbixinta.
Diana oo saaxiib la ah Israac oo la sheekeysanaysa qaar ka mid ah haweenka Bulshada Somaliland, waxay sheegtay in dhaawacaasi uu ka dhigan yahay in taariikhda Somaliland ay tahay mid xaasaasi ah, waana waxyaabaha sababta u ah ujeedada ay u doonayaan in ay ka gudbaan dhibaatooyinkaa taariikhiga ha, isla markaana ugu heelan yihiin sidii loo abuuri lahaa dal togan oo Somaliland ah.
Warbixinta oo ciwaan looga dhigay “Sida ay kooxda Israac ee Sheffield ugu dagaalamayso aqoonsiga Somaliland”, ayaa sheegtay in qaranka Somaliland leeyahay mujtamac u gaar ah, oo leh dawlad iyo ciidan boolis ah, sidaa awgeed iyagoo eegaya UK, waxay jecel yihiin in si rasmi ah loo aqoonsado waddankooda oo ay u abuuraan qaran wanaagsan oo reer Somaliland ah oo ku kala nool daafaha dunida.
Sidoo kale, warbixinta ayaa sheegtay in Somaliland iyo UK uu ka dhexeeyo xidhiidh taariikh dheer oo ay ka mid tahay in ay iska barbar dagaalameen dagaaladii aduunka, sidaas awgeed shacabka reer Somaliland ayaa runtii aad ula dhacsan oo ay isha ku hayaan qaabka UK wax u wado.
Safiya Siciid, oo ka tirsan gollaha deegaanka Burngreave, ayaa sheegtay in Sheffeild iyo bulshadu wax badan u qabteen Somaliland iyo reer Somaliland ee Sheffield.
“Gollaha deegaanka Sheffeild, asxaabta kooxda Somaliland, dadka deegaanka iyo ganacsatada maxalliga ah waxay qabteen shaqo cajiib ah, marka la eego wada hadallada muhiimka ah ee halkan iyo in xidhiidhka Sheffield iyo Somaliland uu ahaa mid aad muhiim u ah oo sidoo kale muhiim ah,” ayay tidhi. .
Safiya ayaa sidoo kale The Star u sheegtay in Somaliland leedahay Bangiyo iyo Kaabayaal dhaqaale oo u gaar ah, isla markaana ay wax badan ka qabatay nabadda adduunka. Waxay aaminsan tahay in dadka reer Somaliland ay xaq u leeyihiin aqoonsiga iyo xaqa ay u leeyihiin inay qaataan aqoonsiga ay raadinayaan.
“Dalku waxa uu ilaashaday nabadiisa, waxa uu ilaashaday xirfadiisa, waxa uu dhawrayay wada noolaanshihiisa sannado badan, dhibaatooyinka dembiyada ayaa isla markiiba la xalliyaa, waxa ay leedahay Somaliland awood cajiib ah, waxaanan dareemaynaa badbaado aan ku socono saacada kow iyo tobbanka iyo haddii ay wax dhacaan. qalad, sida dal kasta ka jira, muwaadiniintu way ka falceliyaan, sharcigana wuu ka falcelinayaa, waxay muujinaysaa adkaysi aad u sarreeya, “ayay tidhi.
“Waxa aanu u baahanahay waa taageero, waxa aannu u baahanahay in aannu idin tusno niyadayada ugu wanaagsan,sida dhaqaalaheenu u saamayn karo aduunka intiisa kale, waxana ay ila tahay in ay wax badan ka baran doonaan aduunka intiisa kale”.ayay raacisay.
Aadam Yuusuf oo ah guddoomiyaha ururka (Israac Somali Community) ee magaalada Sheffeild, ayaa dhankiisa sharaxaad ka bixiyay sababta ay Somaliland ugu qalanto in loo aqoonsado qaran madaxbannaan.
“Somaliland Soddon sanno ayay degannaansho ku naaloonaysay, waxay buuxisay dhammaan shurruudihii madax-banaanida iyo dal madax-banaani lahaa, waayo xuduud cayiman bay leedahay, lacag u gaar ah ayay leedahay, Baasaboor bay leedahay, Toddoba doorasho oo shicib ah oo saddex madaxweynayaal yihiin oo is-daba-joog ah ayay qabsatay, Baarlamaankana markii labaad ayaa lagu doortay doorasho hal qof iyo hal (One Person One Vote) iyo laba golle deegaan, tartanka Ururada siyaasada laba jeer, markaa waxay buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa dawlad caalami ah, waxaana la gaadhay wakhtigii Somaliland dib loogu soo celin lahaa beesha caalamka.”ayuu yidhi, Aadam Yuusuf.
Dhinaca kale, Xamda Cali, oo sannadkii saddexaad wax ka barata jaamacadda Sheffield, ayaa ka warantay niyad-jabka ka jira Somaliland oo aan si rasmi ah loo aqoonsanayn dhinaca dhallinyarada.
“Waxay odhan lahaayeen marka aad isku dayayso inaad buuxiso arji dugsi ama nooc kasta oo arji ah, Somaliland ha tixraacin ee u tilmaan Soomaaliya, laakiin hooyadaa ama aabbahaa gurigaa joogaa waxay ku odhanayaan Somalilander run baad tahay. dhalasho ahaan Somalilander,” ayay tidhi.
Jaaliyada Israac iyo Somaliland ee ku dhaqan Sheffeild iyo UK waxa ay jecel yihiin in ay wacyi galiyaan aqoonsiga Somaliland oo ay aaminsan yihiin in dariiqa lagu gaadhi karo gobanimada ay tahay waxbarashadda iyo awoodda bulshada, ayaa lagu yidhi, warbixinta.
Codsiga aqoonsiga Somaliland waxa uu soonayaa ilaa 24-ka February, waxaana loo baahan yahay in dib loo sameeyo xilligaa, sidaa awgeed Sheffeild waxa ay rajaynayaan in qof kastaa uu wax ka barto Somaliland oo uu ka caawiyo sidii ay aqoonsi caalami ah u heli lahaayeen.
Warbixinta ay daabacday The Star ee qoray Weriye Alex Wilkinson, waxa ka qayb qaatayAadam Yuusuf, Gudoomiyaha ururka Israac Somali Community ee Sheffield, Diana oo saaxiib la ah Israac iyo qaar ka mid ah haweenka bulshada Israac iyo Jaaliyada Somali Israac ee Sheffield, sidoo Mo iyo Katherine.